ओलीको प्रस्तावले प्रचण्डको सातो गयो ! गगन थापाले गरे राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजासँग तुलाना — Riddle Nepal
ओलीको प्रस्तावले प्रचण्डको सातो गयो ! गगन थापाले गरे राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजासँग तुलाना
काठमाण्डु, २९ फागुन – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रको भागमा परेको उपराष्ट्रपति पद राजपालाई दिने ओलीको प्रस्तावलाई प्रचण्डले समर्थन गरेका छैनन् । प्रचण्डले ठाकुरको नाममा समर्थन जनाउन नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको प्रचण्ड निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नै दोहोिरनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसअघि ओली–प्रचण्डबीच उपराष्ट्रपतिबारे सहमति भएपनि राजपालाई सरकारमा सहभागी गारउन ओलीले अध्यक्ष ठाकुरलाई यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
गगन थापाले भण्डारीलाई राजासँग तुलाना गरेपछि…
कांग्रेस सांसद गगन थापाले सार्वभौम मतदाताको अनुभव गर्न नपाएको बताएका छन् ।
थापाले भने, ‘अब उहाँको अगाडि चुनौती छ, बहुमत भएको दलको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति बन्दै हुनुहुन्छ । अस्तिको तीतो अनुभवले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहोला र भन्ने आशंका बोकेर राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँको भूमिका निर्धारण गर्छ, सबैको राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न रु’